Budata Google Play Services APK maka Android
Budata Google Play Services
Free Budata maka Android (36.00 MB)
Budata Google Play Services,
Android File Nyefee bụ a keukwu faịlụ management omume pụrụ iche e mere maka Mac ọrụ. Dị ka isi ọrụ, Android File Nyefee awade ike nyefee data si ngwaọrụ na gam akporo sistemụ na Mac kọmputa.
Dị ka ị maara, Android ngwaọrụ nwere ike jikọọ na PC na-enweghị nsogbu ọ bụla na-enweghị mkpa ọ bụla ọzọ mmemme. O di nwute, otu ihe ahụ abụghị ikpe maka Mac na ndị ọrụ chọrọ mmemme ọzọ. Nyefee faịlụ Android bụ sọftụwia bara uru emebere maka ebumnuche a.
Google Chrome bu ihe nchọgharị intaneti di mfe, di mfe ma ama. Wụnye ihe nchọgharị weebụ nke Google Chrome, sọfụ ịntanetị ngwa ngwa na ntukwasi-obi. Google Chrome bu ihe nchọgharị...
Mgbe wụnye usoro ihe omume, niile i nwere ime bụ jikọọ gị Android ngwaọrụ na kọmputa gị site na USB na nyefee ndị dị mkpa faịlụ. Echeghị m na ị ga-ezute ihe isi ike ọ bụla mgbe iji gam akporo File Nyefee nihi na ọ nwere nnọọ mfe na-eji na mfe interface.
Google Play Services Ụdịdị
Nha faịlụ: 36.00 MB
Mmepụta: Google LLC
Ngwa ExpressVPN so na ngwa VPN nke ndị chọrọ ịnweta ịntanetị na -akparaghị ókè ma nwee nchekwa na...
GBWhatsapp (APK) bụ ngwa efu na -enye atụmatụ nke ngwa nkwukọrịta WhatsApp, nke dochie SMS, anaghị....
SuperVPN Onye ahịa VPN efu bụ ngwa VPN nefu maka gam akporo. SuperVPN, mmemme VPN a na -enye naanị...
Flightradar24, ngwa nsuso ụgbọ elu kacha ewu ewu nụwa; Ngwa njem #1 na mba 150. Tụgharịa ekwentị...
Site na ngwa Solo VPN, ị nwere ike jikọọ na ịntanetị nenweghị nsogbu site na ngwaọrụ gam akporo gị....
WhatsApp Plus APK bụ ngwa eji eme ihe na ekwentị gam akporo na-agbakwunye atụmatụ ndị ọzọ na ngwa...
FOXplay bụ ụdị ikpo okwu ebe ị nwere ike ilele ihe nkiri na usoro na ịntanetị, ebe naanị ọdịnaya...
Snapchat bụ otu ewu ewu na-elekọta mmadụ media ngwa. Ngwa nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke pụtara...
WhatsApp Aero Hazar bụ ngwa WhatsApp nwere ntụkwasị obi enwere ike ibudata ma wụnye dị ka APK na...
Facebook Messenger Lite (Ngwa) bụ ngwa izipu ozi ngwa ngwa maka mba ebe Facebook nwere njikọ...
NightOwl VPN bụ ngwa ngwa, nchekwa, nkwụsi ike, ngwa VPN dị mfe maka ndị ọrụ ekwentị gam akporo....
Call Voice Changer bụ otu ngwa na -agbanwe olu nwere ike iji na ekwentị gam akporo na...
Zemana Antivirus bụ ngwa antivirus dị elu ewepụtara maka ndị ọrụ ekwentị gam akporo. Ị nwere ike...
VPN echekwara bụ ngwa ngwa ngwa ngwa nke na-enye ndị ọrụ ekwentị gam akporo ọrụ nnọchiteanya VPN...
Na CM Security Okwey, ị nwere ike ịnweta iwu weebụsaịtị gị gam akporo ngwaọrụ na-eme ihe megide...
Ngwa mkpanaka HealthPass bụ ngwa paspọtụ ahụike nke Ministry of Health mepụtara maka ụmụ amaala...
SuperNet Okwey bụ kpam kpam free, obere size Okwey ngwa. Download mfe, ngwa ịkpọghee saịtị na ngwa....
Oneday VPN bụ ngwa VPN na -akwụghị ụgwọ nke na -enye ụzọ IP netiti ọnọdụ sava iri abụọ na isii na...
Türk Telekom Pokus bụ ngwa akpa dijitalụ ebe ị nwere ike ịkwụ ụgwọ site na ịzụ ahịa na egwuregwu,...
Quibi bụ ngwa yiri Netflix, ihe nkiri ihe nkiri-TV-akwụkwọ ihe nkiri a ma ama. Ezubere naanị maka...
Ngwa Tornado VPN na -enye okporo ụzọ data na -akparaghị ókè, na -emeghe weebụsaịtị ndị egbochiri ma...
TextNow bụ ngwa nweta nọmba ekwentị nefu ị nwere ike ibudata na ekwentị gam akporo gị dịka APK....
AppUpdater maka Whats Plus 2021 GB Yo FM HeyMods bụ ngwa ị nwere ike iji melite WhatsApp kachasị...